UMuriel Harris Umklomelo Wenkonzo Evelele - Inhlangano Yezikhungo Zokubhala Yamazwe Ngamazwe
Iqanjwe ngomamukeli wayo wokuqala futhi yanikezwa kuyo yonke enye ingqungquthela ye-International Writing Centers Association (IWCA), i-Muriel Harris Outstanding Service Award ibona isevisi evelele eye yazuzisa umphakathi wesikhungo sokubhala samazwe ngamazwe ngezindlela ezibalulekile nezisekelwe ebanzi.
Iziphakamiso kufanele zithunyelwe njengedokhumenti eyodwa ye-PDF enamakhasi anezinombolo, futhi kufanele ifake izinto ezilandelayo:
Incwadi yokuqoka ehlanganisa igama nesikhungo salowo oqokiwe, ulwazi lwakho lomuntu siqu noma ulwazi lwakho ngeminikelo yesevisi yomuntu oqokiwe emphakathini wesikhungo sokubhala, kanye negama lakho, inhlangano yesikhungo kanye nekheli le-imeyili.
Imibhalo yokwesekwa enemininingwane (ubuningi bamakhasi ayi-5). Lokhu kungase kuhlanganise izingcaphuno ze-curriculum vitae, workshop noma impahla eshicilelwe, izindaba noma ama-anecdotes, noma umsebenzi wokuqala owenziwe ngoqokiwe.
Ezinye izinhlamvu zokusekela (ongakukhetha kodwa kukhawulelwe ku-2)
2020 Inqubo Yokuqoka: Iziphakamiso zizokwamukelwa kuze kube nguJuni 30, 2020. Thumela amagama aphakanyisiwe kuSihlalo we-MHOSA, uMichele Eodice (meodice@ou.edu).
Funda ngomlando weMHOSA ku I-Writing Lab Newsletter 34.7, amakhasi 6-7 .
2016: Pawu Gillespie futhi UBrad Hughes
2006: U-Albert DeCiccio
1997: U-Byron Hlala